एनआईसी एसिया क्यापिटलकाे खुलामुखी म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नु कत्तिको उपयुक्त ? – BikashNews
२०७७ मंसिर १२ गते १७:०२ विकासन्युज
काठमाडौं । आज (मंसिर १२ गते) देखि एनआईसी एसिया क्यापिटलले प्रतिइकाईं १० रुपैयाँ मूल्य बराबरका ४ करोड २५ लाख खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजना विक्री थालेको छ । बन्दमुखी योजना यसअघिदेखि नै प्रयोग र संचालनमा रहेपनि खुलामुखी योजना भने नेपालमा अझै पनि व्यापक प्रयोगमा नआएकोले नौलो नै हो ।
पुँजी बजार बारे जानकार दिलिप मुनंकर्मी विश्वमा अहिले विशेष गरेर २ प्रकारको सामुहिक लगानी कोष योजना प्रचलनमा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलादेखि नेपालमा पनि प्रयोग र अभ्यासमा आइसकेको बन्दमुखी योजना एउटा र अर्काे खुलामुखी योजना हो ।
‘निश्चित अबधि वा समय तोकेर ल्याइएको योजना बन्दमुखी योजना हो, यस्ता योजनाहरु कुनै ५ वर्षे, कुनै १० वर्षे जस्ता समय अवधिका हुने गर्छन्, खुलामुखी योजना भनेको यसको कुनै निश्चित समय तोकिएको हुँदैन, सधैभरीका लागि खुला हुन्छन्,’ मुनंकर्मीले भने ।
संचालनमा आइसकेका सिद्धार्थ इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट फण्ड, नविल व्यालेन्स फण्ड आदि बन्दमुखी योजना हुन् । यस्ता योजना निश्चित समयपछि बन्द हुन्छन् र लगानीकर्तालाई योजना संचालकले लगानी रकम फिर्ता दिन्छन् । यसरी फिर्ता हुने रकम भने खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) का अनुसार हुन्छ । कोष परिचालनबाट प्राप्त भएको प्रतिफलका आधारमा योजना खरिदकर्ताले पनि प्रतिफल पाउँछन् ।
बन्दमुखी योजनाहरु धितोपत्र कारोबार हुने दोस्रो बजार अर्थात नेपालको सन्दर्भमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत भएर खरिद विक्री गर्न सकिन्छ । यी योजनाका इकाईंहरु सेयर जस्तै गरी सहज रुपमा खरिद विक्री गर्न सकिन्छ । र, बजारमा इकाईंहरुको खुद सम्पत्ति, माग र आपूर्तिका आधारमा पुँजीगत लाभ वा हानी प्राप्त हुन्छ ।
अहिले एनआईसी एसिया क्यापिटलले संचालनमा ल्याएको ‘एनआईसी एसिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड’ खुलामुखी योजना हो । समयसीमा निर्धारण नगरी संचालनमा ल्याइएका योजनाहरु खुलामुखी हुन् । पुँजी बजारबारे जानकार मुनंकर्मीका अनुसार नेपालमा संचालित पहिलो खुलामुखी योजना एनसीएम म्युचुअल फण्ड हो । तर, पछि गएर यो योजना बन्दमुखीमा परिणत भएको थियो ।
खुलामुखी योजनाहरु भने नेप्सेमा सूचिकृत हुँदैनन् । इकाईं खरिदकर्ताले विक्री गर्नु परेमा वा अन्य कसैलाई यस्ता योजनाहरु खरिद गर्नु परेमा कोष संचालकले नै खरिद वा विक्री गरिदिन्छन् । अर्थात तपाईंले इकाईं खरिद गर्नुभएको छ भने विक्री गर्ने पनि सोही कोष संचालक वा उसले तोकेको डिलरसँग हो । एनआईसी एसिया क्यापिटलले अहिले ल्याएको इकाईं किनेर पछि विक्री गर्ने भनेको पनि सोही क्यापिटललाई नै हो । यसरी विmक्री गरेका इकाईंहरु कोष संचालकले फेरि विक्री गर्ने गर्छन् । यस्ता इकाईंको मूल्य भने खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) ले निर्धारण गर्छ ।
कस्तो हो एनआईसी एसिया डाइनामिक डेप्ट फण्ड ?
एनआईसी एसिया क्यापिटलले पहिलो पटक खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजनाको इकाई निष्काशन गरेको छ । ‘एनआइसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्ड’ नाम दिइएको यो योजनामा ४ करोड २५ लाख इकाई छन् । योजना आज (१२ मंसिर) देखि १६ मंसिरसम्म किन्न पाइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
क्यापिटलले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रका अनुसार यस योजनाले निश्चित आम्दानी हुने उपकरणहरुमा बढी केन्द्रित भएर लगानी गरिनेछ । इकाई विक्रीबाट संकलन भएको रकम ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, सार्वजनिक रुपमा जारी गरिएको सेयर जस्ता निश्चित प्रतिफल दिने उपकरणमा लगानी गरिने कोष संचालकले जानकारी दिएको छ । अर्थात, कुल संकलित रकममध्ये ६५ प्रतिशत रकम बण्ड, डिबेन्चर जस्ता मुद्रा बजारका उपकरण (डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट) मा, २० प्रतिशत रकम सेयर (आइपीओ तथा दोस्रो बजारमा सेयर खरिद विक्री) मा र १५ प्रतिशत रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको रुपमा राख्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले लगानीकर्तालाई पहिलो वर्षदेखि पाचौं वर्षसम्म कम्तिमा पनि ९ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने भनेको छ । कम्पनीले प्रक्षेपण गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भएमा नियमित आम्दानी हुने र केही रकम बचत गर्नेहरुका लागि बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा बढी लाभदायक हुनसक्छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा ५० करोड रुपैयाँको योजना संचालन गर्न पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कोष प्रबद्र्धक एनआईसी एशिया बैंकले विऊपुँजीको रुपमा लगानी गरिसकेको छ । बाँकी रहेको प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यको ४ करोड २५ लाख इकाई सार्वजनिक निष्कासन गरिएको हो । सो इकाई विक्रीबाट ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन हुनेछ । यो योजनामा सहभागीले १ हजार रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफै जोखिम लिन नचाहने र सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्न चाहनेलाई यो बढी उपयुक्त हुन्छ ।
2 comments on "एनआईसी एसिया क्यापिटलकाे खुलामुखी म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नु कत्तिको उपयुक्त ?"
It’s like portfolio management authorization toasecond party to invest on behalf of the first party.Here the profit is limited but is already promised and the conpany that uses your capital for investment decides what share of the profit you deserve and not the market movement.Please correct me as I am still not clear about this kind of open debenture issue.
It is not PMS and there is comperative between PMS and MF. MF has tax benefit and reservation in IPO. Among other MF it is more focussed in debt instrument that gives risk benefit at the sametime lower return.